Nezvedu - Beijing LINGZE Medical Technology Development Co, Ltd
Batsira vatengi vedu uye tarisiro yekuwana izvo zvavanoda izvo zvinogona kuchengetedza yavo yekutsvaga nguva
Beijing L&Z Medical Technology Development Co, Ltd uye L&Z US, Inc yakagadzwa muna 2001 na2012 kugadzira, kugadzira, kugadzira, uye kutengesa zvigadzirwa zvekurapa vachishandisa akanyanya mwero.
Iyo inoumbwa nematarenda ane hunyanzvi kubva kumatanho mazhinji ekugadzira nharaunda yebasa.
Zvigadzirwa zvakagadzirwa uye zvakagadziriswa nekambani iri-mumba mainjiniya timu uye inogadzirwa muChina neUSA.
Beijing L&Z Medical Technology Development Co, Ltd uye L&Z US, Inc yakagadzwa muna 2001 na2012 kugadzira, kugadzira, kugadzira, uye kutengesa zvigadzirwa zvekurapa vachishandisa akanyanya mwero. Iyo inoumbwa nematarenda ane hunyanzvi kubva kumatanho mazhinji ekugadzira nharaunda yebasa. Zvigadzirwa zvakagadzirwa uye zvakagadziriswa nekambani iri-mumba mainjiniya timu uye inogadzirwa muChina neUSA.
Chinangwa chekambani ndechekutungamira mukugadzirwa uye kuvandudzwa kwemidziyo yekurapa kuti ipe akateedzana ezvigadzirwa zvekurapa, zvakavimbika, uye zvisingadhuri, kuzadzisa chinangwa chekugadzirwa kwepamba kweEnteral uye Parenteral Nutrition Zvigadzirwa zvemishonga, zvigadzirwa zvekuwana vascular uye zvimwe zvigadzirwa zvekurapa, uye shingairira kugadzira zvigadzirwa zvedu nemasevhisi padyo nemusika uye kudzikisira mutoro wevarwere. OEM / ODM inowanikwa kune vamwe vedu uye isu tinogara tichibatsira vatengi vedu uye tarisiro yekuwana izvo zvavanoda izvo zvinogona kuchengetedza yavo yekutsvaga nguva.
yekutanga Chinese kambani inoburitsa zvinodyiwa zveEnteral neParenteral zvinoshandiswa
shanda mumunda wechigadzirwa chekurapa kwemakore makumi maviri
19 patent yeUtility modhi patent uye National yekugadzira patent
30% mugove wemusika weEnteral uye Parenteral yekudyisa yekurapa mudziyo muChina
Kune vashandi vekurapa, dzidzo yave chikamu chakakosha che pre-basa uye nekuvandudza hunhu hunoshanda. Kune vagoveri, kugona uye hunyanzvi zvinonyanya kusaparadzaniswa nedzidzo. Beijing L&Z Academy inotarisira kupa vashandi vezvokurapa uye nevaparidzi vedu mukana wekuwana ruzivo uye hunyanzvi hunodiwa kuitira kuti vagadzirise zvakajairika basa.
L&Z Medical Academy inopa kumeso-kumeso kudzidziswa kwevashandi vezvokurapa uye vagoveri muChina nemhiri kwemakungwa. Izvi zvinosanganisira makiriniki ekushandisa, zvigadzirwa uye maficha, yedu kambani maitiro uye zvichingodaro.
L&Z Medical Academy inoronga online kudzidziswa gore rega rega nezvakasiyana zvidzidzo uye misoro.
Beijing L & Z Medical yakavambwa
Yakawana iyo Yekushandisa Muenzaniso Patent yeInoraswa Ineral Feeding Set
BAITONG akateedzana zvigadzirwa zvakatangwa
With pakagadzwa rokutengesa chikwata, okutengesa migero vakanga zvishoma nezvishoma kuwedzerwa, uye nguva Beijing L & Z Medical yakavhurwa
Yakawanikwa 3 Inoshandiswa Model Patents yeBAITONG akateedzana Nasogastric chubhu
Kusangana nezvinodiwa zvekuwedzera bhizinesi, chirimwa chekugadzira chakawedzerwa
Yakazvimiririra yakagadzirwa uye inogadzira yekutanga Enteral Feeding Pump ine yayo yekuchengetedza yekudziya mudziyo unokodzera vanhu veAsia, uye vakabudirira kuitangisa iyo pamusika
Iva wekutanga batch yemakambani ekurapa ekurapa anozivikanwa neGMP yeChinese Chikafu neDrug Administration (Ikozvino inonzi National Medical Zvigadzirwa Zvekushandisa - NMPA)
L&Z US yakanyoreswa muUnited States, ichivavarira kugadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro
Beijing L & Z yakatenderwa senyika yepamusorosoro bhizinesi
Iyo PICC Line zvigadzirwa zvakagadzirwa uye zvakagadziriswa neL & Z US yakawana FDA 510 (k)
Yakawanikwa 6 Yekushandisa Model Patents, inonzwisisika yakagadziridzwa zvazvino zvigadzirwa mitsara
Gamuchira 2 National Invention Patents uye 1 Inoshandiswa Model Paten
Yakawanikwa 1 National Invention Patent uye 3 Utility Model Patents uye mugore rimwe chete Beijing L&Z yakatenderwa sebhizimusi renyika yehunyanzvi rwechipiri
Yakawanikwa 1 Yekushandisa Model Patent